“Wakiilladu Waa ‘Kansar’ Ku Dhexjira Kubadda Cagta Loomana Baahna” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Wakiilladu Waa ‘Kansar’ Ku Dhexjira Kubadda Cagta Loomana Baahna”
Mulkiilaha kooxda kubadda cagta Napoli Aurelio De Laurentiis ayaa sheegay in wakiiladu ay noqdeen “kansar” ku dhexjira ciyaaraha waxa uuna ku adkaysanayaa in ciyaartoydu aanay u baahneyn inay wakiilo yeeshaan. Arrintan ayaa daba socotay baadhitaan uu sameeyay wargeys ka soo baxa Britain kaasi oo uu Sam Allardyce ku waayay xilka tababaraha xulka Ingiriiska, iyadoo sidoo kalana su’aal la galiyay doorka wakiillada ee kala iibsashada ciyaartoyda. De Laurentiis, oo ah 67 jir u dhashay dalka Talyaaniga, oo sidoo kale ah soo saare filim, ayaa sheegay in wakiiladu “ay noqdeen sida canshuurta oo kale” oo doonaya in afka hore qarashkooda laga bixiyo.
“Hollywood, jilaagu isaga ayaa wakiilka lacagta siiya. Marka ay timaado kubadda cagta maxaan anigu u bixinayaa?” ayuu yidhi. De Laurentiis ayaa sheegay in qaar ka mid heshiisyada lagula kala wareego ciyaartoyda ay u burburaan is afgaranwaa dhexmara kooxaha iyo wakiilada oo ku saabsan xaqa uu ciyaartoyga u leeyahay inuu wax ka helo dakhliga xayeysiiska uu u sameeyo kooxda. “Ma og tahay taasi waa kansar aagayaga ka jira,” ayuu ku daray. “Wakiilkaste sidaa ma ahan. Hasayeeshee ma garan karo sababta aad ugu baahan tahay wakiil.”
Sikastaba ha ahaatee, Mel Stein, gudoomiyaha Xidhiidhka Wakiilada Kubadda Cagta ee xilka sii banaynaya, ayaa rumaysan in sidaa oo kale eeddan mid la mid ah lagu tilmaami karo milkiilayaasha iyo gudoomiyayaasha kooxaha qaarkood. “Arrinta dhabta ah waxa weeye in ay jiraan dad aan wanaagsanayn, laakiin kuligood laguma wada tilmaami karo kansar,” ayuu yidhi. “Waxaan doonaynaa inaannu arrinta wax ka qabano, waanuna garanaynaa sida wax looga qaban karo.”